ओली र रावलको शिक्षा कति ? « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, १३ मंसिर । नेकपा एमालेको महाधिवेशन अघि भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए । जसमा उनले व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरे । रावलले विद्यावारिधी गरेको विवरणमा उल्लेख गरेका थिए ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने महाधिवेशन अघि व्यक्तिगत विवरण खुलाएनन् । उनले ताप्लेजुङमा प्रारम्भिक शिक्षा पूरा गरी झापा गएको उल्लेख छ । ओलीको औपचारिक शिक्षा खुलाइएको छैन । उनले १० कक्षासम्म पढेको विषय बेला बेलामा उल्लेख हुने गरेको छ । तर, ओलीले स्वअध्ययनबाट धेरै ज्ञान हासिल गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
रावलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका छन् । उनले कानुनमा स्नातक पनि गरेका छन् । एमालेका बौद्धिक नेताको परिचय बनाएका उनी खरो बोली बोल्छन् । तथ्य र तथ्यांकसहित बोल्ने स्वभाव छ ।
ओलीको विभिन्न विषयमा गहिरो ज्ञान छ । डेढ दशक जेल जीवनका क्रममा ओलीले विभिन्न विधाका पुस्तक पढेका छन् । संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजीमा धाराप्रवाह बोल्न सक्छन् ।
ओलीको औपचारिक अध्ययन धेरै छैन । तर, विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा पुगेर अन्र्तक्रियामा भाग लिएका छन् । धर्म, संस्कृति, इतिहासमा गहिरो ज्ञान देखिन्छ ।
एमाले अध्यक्षका प्रतिष्पर्धी ओली र रावल दुवैमा विभिन्न विधाको गहिरो ज्ञान छ । रावलले औपचारिक शिक्षा पनि लिए जसमा ओली रावलभन्दा निकै पछाडि छन् । तर, ज्ञान र अनुभवका हिसाबले ओली र रावल दुवै उत्तिकै देखिन्छन् ।
सरकारी जग्गा लिजमा लिने सबै त्राहिमाम
काठमाडौं, ३ माघ । सरकारले व्यवसायीलाई धमाधम लिजमा जग्गा दिने क्रम बढिरहेको छ । नेपाल
पशुपति धर्मशालामा बतासद्वारा ‘३५० रुपैयाँको बेड २९०० मा विक्री’
काठमाडौं, ३ माघ । पशुपति धर्मशालामा ३५० को बेडलाई २९०० रुपैयाँ लिई आनन्द बतास प्रा.लिंले
मुक्तिनाथ हत्याको २० वर्ष, न्याय खोइ ?
काठमाडौं, ३ माघ । लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको
स्थानीय चुनावअघि नै कमल थापाले राप्रपा फुटाउने !
काठमाडौं, ३ माघ । राप्रपाको गत मंसिरमा सम्पन्न भएको महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्देनसँग अध्यक्षमा पराजित भएका